ယိချင်း | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
ယိချင်း	# ဖုန်းရွှေ လာပြီPublished September 27, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
“ဖုန်းရွှေ” ဆိုတာ လူနာမည် မဟုတ်ပါ။ တရုတ်လူမျိုးတို့၏ ရိုးရာ အမွေအနှစ် “ဂမ္ဘီရ” ပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်အသံထွက် အမှန် (အနီးစပ်) ဆုံးကတော့ “ဖန်းရှုရီ” (Feng shui) လို့ ထွက်ရမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီပညာကို ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးသူလို့ ဆိုနိုင်လောက်တဲ့ “ဆရာဟိန်းလတ်” က သူရဲ့ ပထမဆုံး (Feng shui) စာအုပ်ကို “ဖုန်းရွှေ” လို့ နာမည်ပေးလိုက်တဲ့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီပညာဟာ “ဖုန်းရွှေ” လို့ “နာမည်ပေါက်” သွားပါတော့တယ်။
“ဖုန်းရွှေ” ဆိုတာ ဘာလဲ? ။ ဘယ်လို ဂမ္ဘီရ ပညာလဲ? ။ ဟုတ်ကဲ့ – မှန်တဲ့အတိုင်း ပြောရင် ကျွန်တော်လည်း သိပ်မသိပါ။ ဒီပညာက ကျွန်တော် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာတစ်ခု မဟုတ်ပါ။
ဒီပညာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဆရာဟိန်းလတ် နဲ့ ဆရာသက်လုံ တို့ရဲ့ စာအုပ်တွေလောက်သာ ဖတ်ဘူးပြီး ဒီပညာအကြောင်း နှိုက်နှိုက် ချွတ်ချွတ် မလေ့လာဘူးပါ။ လက်တွေ့နဲ့ ယှဉ်ပြီးတော့ လည်း သုတေသန မပြုဘူးပါ။ “စာသိ” လောက်ဘဲ ရှိပါတယ်။
စာသိအရတော့ “ဖုန်းရွှေ” ပညာဟာ “နေအိမ်၊ အဆောက်အဦ အခင်းအကျင်း” တွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပညာဖြစ်ပြီး “နေအိမ် အဆောက်အဦပညာ” (ဂေဟာဗေဒ)လို့ ခေါ်ရမလား ထင်ပါတယ်။ အဆောက်အဦး တစ်ခု ဆောက်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမြေနေရာမျိုး ရွေးရမယ်၊ ဘယ်လို ပုံစံမျိုး ဆောက်ရမယ်၊ ဘယ်လို အခန်းဖွဲ့စည်းပုံမျိုး ဖွဲ့ရမယ်၊ ဘုရားစင်က ဘယ်နေရာ၊ ဧည့်ခန်းက ဘယ်နေရာ ၊ မီးဖိုဆောင်က ဘယ်နေရာ၊ အိမ်သာ ရေချိုးခန်းက ဘယ်နေရာ . . . စသည်ဖြင့် စနစ်တကျ နေရာချထားတဲ့ ပညာကို “ဖုန်းရွှေ” ပညာလို့ ခေါ်ပါတယ်။
အဆောက်အဦးရဲ့ ကျက်သရေ မင်္ဂလာကို တိုးတက်စေတဲ့ ပစ္စည်းများ ဖြစ်တဲ့ “ငါးကန်” လေးတွေ၊ နိမိတ်ကောင်းတဲ့ ပန်းပင်လေးတွေ၊ အသံချိုလွင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို နေရာချ ထားတဲ့ ပညာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ပစ္စည်းကို ဘယ်နားမှာ ထားရမယ်၊ ဘယ်ပစ္စည်းကို ဘယ်နားမှာ မထားရဘူး ဆိုတာတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Posted in ဂမ္ဘီရ | Tagged Feng shui, MaHaBote, Myanmar Astrology, ဂမ္ဘီရ, တရုတ်ရိုးရာ ဗေဒင်, ဖုန်းရွှေ, ဘုတ်ကြီး(၈)ပါး ဗေဒင်, ယိချင်း, အိုးအိမ်ဆောက်လုပ်မှု ပညာ	# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော?Published October 14, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု နေသူတွေ အတွက် ယနေ့မှာတော့ အလွန်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးလေး တစ်ခုကို တင်ပြ ဆွေးနွေး ချင်ပါတယ်။
ဗေဒင်ပညာဆိုရာ ရှေ့ဖြစ်ဟော အတတ်ပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူမျိုးအလိုက်၊ ဒေသအလိုက် သူ့မူနဲ့သူ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေတော့ ရှိနေကြ တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သူနိုင်ငံ သူလူမျိုးနဲ့ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ဗေဒင်ပညာမျိုးစုံ ရှိကြတာ ချည်းပါဘဲ။ ဗေဒင်ပညာမရှိတဲ့ လူမျိုးရယ်လို့ မရှိလောက်ပါဘူး။ တောင်အမေရိက၊ အာဖရိက တိုက်တွေက တောနက်တွေထဲမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ လူရိုင်းမျိုးနွယ်တွေတောင်မှ သူတို့ ရိုးရာ ဗေဒင်တွေ ရှိကြပါတယ်။
ကမ္ဘာမှာ လူဦးရေ အများဆုံးဖြစ်တဲ့ “တရုတ်” လူမျိုးတွေမှာ “သတ္တ၀ါ(၁၂)ကောင်” ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ (၁၂)ရာသီခွင် ဗေဒင်ပညာနဲ့ “ယိချင်း” ဗေဒင်ပညာတို့ဟာ ထင်ရှားပါတယ်။ အိန္ဒိယကတော့ “အရှေ့တိုင်း နက္ခတ်ဗေဒင်” ပညာပေါ့။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ မိဿ၊ ပြိဿ , အစရှိတဲ့ (၁၂)ရာသီခွင် ဗေဒင် ဟာ လူသိများပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ “ဆရာစံဇာဏီဘို” က စ, လိုက်တာ (၁၂)ရာသီခွင်ဟောကိန်းတွေ “ဟောတစ်ခု၊ ဟောတစ်ခု” ဆိုတာလို မှိုလိုပေါက် လာကြတာ အများအသိပါဘဲ။ (ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အသစ်တီထွင်တဲ့ နေရာမှာ အဖြစ်သိပ် မရှိကြပေမယ့် သူများ အောင်မြင်လာရင် လိုက်တုတဲ့နေရာ မှာတော့ တစ်ကယ့် စံပြဆိုလောက်တဲ့ လူမျိုးပါ)။
Posted in နာမက္ခရဗေဒ | Tagged mahaboke, MaHaBote, Myanmar Astrology, နာမည်တို့၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ, ယိချင်း, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,756)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,419)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,203)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,046)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,071)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,381)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,205)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,713)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,750)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,408)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,355)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,215)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,162)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,134)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,456)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,413)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,080)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,908)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,761)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,755)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,292)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,896)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,780)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,744)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,610)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,565)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,354)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,172)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,161)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,063)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !
15 Users Online	Link1 | Link2 | Link3Copyright © 2013. Compu BayDaThuKhuMa. Designed by CompuBayDaThuKhuMa.